Jubbaland oo ka hadashay iska horimaadkii maanta ka dhacay Kismaayo | Dhacdo.com
Home Wararka Maanta Jubbaland oo ka hadashay iska horimaadkii maanta ka dhacay Kismaayo
Jubbaland oo ka hadashay iska horimaadkii maanta ka dhacay Kismaayo
Maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ka hadleen iska hor imaadkii maanta ka dhacay Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulkaasi.
Wasiirka warfaafinta Dowlad goboleedka Jubbaland oo galabta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa sheegay in ciidanka amniga Jubbaland ay fashiliyeen isku day ay Dowladda Federaalku ku khal khal gelinayso nabadgelyada magaalada Kismaayo.
Eng Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed Wasiirka warfaafinta Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in ciidanka amniga Jubbaland ay dhabarka ka jabiyeen qorshe ay Dowladda Federaalku ugu talo gashay in ay ku bur-buriso nabadgelyada magaalada Kismaayo, iyada oo adeegsanaysa kooxo hubaysan ah.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Federalka Somaliya muddo lix bilood ah dhibaato ay ka daba wado Jubbaland, balse Jubbaland arrintaasi aysan u dulqaadaneyn.
Wasiirka ayaa sheegay inaanu wax khasaaro ahi ka dhalan iska horimaadkaasi, balse wararka laga helayo Magaalada Kismaayo ayaa sheegaya inuu khasaaro jiro.
Warar is khilaafsan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay iska horimaadkan. Wararka qaar waxay sheegayan in saddex qof ay ku dhaawacantay oo laba ka mida ay dumar yihiin, halka midka kalena uu yahay askari ka tirsan Ciidamada Jubbaland, warar kalena waxay sheegayan in hal qof uu ku dhintay, laba kalena ay ku dhaawacantay.
Maamulka Jubbaland & Dowladda Federalka Somaliya, ayaa waxaa ka dhaxeeya Khilaaf dhanka siyaasadda ah.